Malunga nathi-Qingdao Yuanhengtong oomatshini Co., Ltd.
Iindawo oomatshini Textile
Iziko Machining nc
Shaft iindawo machining
Yasekwa ngo-2012, Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd. ligxininisa R & D kunye nokuveliswa kwezixhobo non-standard, kunye nezixhobo ezenziwe ngokusingqongileyo-friendly kwimizila yemveliso oluzenzekelayo.
Ukusika iinxalenye ezingekho mgangathweni, iinxalenye zesinyithi ezichanekileyo, iinxalenye zoomatshini, izixhobo zentsimbi ezenziwe ngentsimbi, ukuqhubekeka kwezahlulo ezingenasici Iimveliso ezingaphezu kwe-1000 iintlobo. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo anje ngezixhobo, unxibelelwano, izixhobo zoomatshini, iinxalenye zemoto, njl.Umgangatho wemveliso ukwindawo ephambili phakathi koogxa basekhaya.
Izinto ezingafunekiyo ezivelisiweyo yintsimbi engenasici, isinyithi, ubhedu, i-aluminiyamu, njl., Ezilungileyo kakhulu ekuqhubekeni kwezinto zensimbi ezingenasici, ukuqhubekeka kwangaphakathi nangaphandle, kunye nokuqhubekeka kwetyathanga kwezahlulo zobhedu, ialuminiyam kunye neentsimbi. Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd. unamandla zobugcisa olomeleleyo. Iziko eliphambili eliphambili lokuchwetheza, ulungelelwaniso oluzenzekelayo lwe-lathe, i-lathe yolawulo lwamanani, isixhobo se-lathe, i-punch grinder kunye nezinye izixhobo zemveliso ezixhasayo, ukusebenza ngokuchanekileyo kufikelela kuma-0.005 mm, kwaye uvavanyo oluhambelanayo lugqityiwe.
Ngamava ethu otyebileyo oqeqeshiweyo kunye namandla esayensi kunye netekhnoloji, sihlala sizama izinto ezintsha, kuyilo lwemveliso ukuya kwimveliso yamalungu, ukubonelela abasebenzisi ngeemveliso zentsebenzo ezigqwesileyo. Kwaye igama elihle kunye nenkonzo esemgangathweni, iyathandwa ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Sibamkela ngokunyanisekileyo abathengi baseTshayina nabangaphandle ukuba beze kutyala imali, uku-odola, ukuqhuba ikhomishini, uyilo kunye nokusebenza. Ukwenza machining, ukwenziwa kwesinyithi, ukwenziwa kwesinyithi, izixhobo zehardware, ukuqhubekeka ngentsimbi. Sizimisele ukusebenzisana ngokunyanisekileyo noogxa ekhaya nakumazwe aphesheya ukudala okuqaqambileyo kunye!